ခင်မင်းဇော်: စိတ်ကူးတည်ရာ မှတ်တမ်း
ခုရက်ပိုင်းမှာ အိမ်မှာ လူ၃ ယောက်ရှိတာ တယောက်တလှည့်ဖျားနေတာရယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများနေ့ ကို ကျင်းပဖို့ လုပ်ရကိုင်ရ ကြိုးစားရနဲ့ရယ်... အလုပ် တော်တော်ရှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ စာမရေးဖြစ်သလို ဘလော့လဲ မလည်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဘလော့လည်တဲ့အခါလဲ အနောနီးမတ်မရှိတဲ့ ဘလော့တွေမှာ ကောမန့်ပေးဖို့ ပတ်စ်ဝက် ရိုက်ဖို့ ပျင်းတာနဲ့ မပေးဖြစ်ခဲ့ပြန်ဘူး။ ဘလော့ရွာထဲမှာ ခုတလော မရေးနိုင် မဖတ်နိုင် နဲ့ စိတ်တွေလဲ လေးလံထိုင်းမှိုင်းစရာ အခြေအနေတွေက ဖြစ်ပျက်နေတာလဲ ပါတာပေါ့။
ဒီတလလုံးမှာ အန်တီ့အတွက် တရားစီရင်ချက် ချတော့မယ် ချတော့မယ် ဆိုတာလဲ ကြားရဲ့၊ ရုံးချိန်းရက်တွေကလဲ ပြောင်းလဲ ပြီးရင်း ပြောင်းလဲလို့။ ကျမတို့မှာ ဘာမှစိတ်မ၀င်စားနိုင်ဖြစ်ရအောင် လေးလံထိုင်းမှိုင်းရင်း စိတ်ညစ်ညူး နေရပါတယ်။ မတရားတဲ့ စစ်အစိုးရ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ အန်တီ့ကို ကျန်းမာပါစေလို့ သာ ဆုတောင်းနေရဦးမှာပါ။ (ကျမက ဆုတောင်းတာကို မလုပ်ချင်ဆုံးပါ)
ကဗျာဆရာ ကိုလွမ်းဏီရဲ့ စိတ်ကူးဖန်တီးချက်ပါ
ဇွန် ၁၉ ရက်နေ့ အခမ်းအနားမှာ အန်တီ့ပုံတူမျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ပြီး ....
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တကွ နိုင်ငံအရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ....ချက်ချင်းလွှတ်(၂)
စစ်အာဏာရှင်စနစ် ..... ................................................................................ကျဆုံးပါစေ(၂)
ထုံးစံအတိုင်းပါပဲလေ မွေးနေ့ရှင်မရှိတဲ့ မွေးနေ့ပွဲတွေ ၊ အဲဒီမွေးနေ့ရှင်ကို လေးစားဂုဏ်ပြုချင်လို့ သူမမွေးနေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ သတ်မှတ် ကျင်းပတာရော သတင်းတွေ ကို ၀မ်းနည်းဝမ်းသာစိတ်နဲ့ ဖတ်ရ ကြည့်ရပါတယ်။
တနေ့နေ့ အန်တီလွတ်လာချိန်ကျရင်တော့ ခုထက်ပိုပြီး ပျော်ရွှင်တက်ကြွဖွယ် မွေးနေ့ပွဲနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများနေ့ အဖြစ် တခမ်းတနား စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက ချီးမြှင့်တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုတွေနဲ့ အတူ မြန်မာပြည်သူတွေက ချီးမြှင့်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများနေ့ ကို အန်တီ ပျော်ရွှင် ဂုဏ်ယူစွာ ပါဝင်ဆင်နွှဲစေချင်ပါတယ်။
ပြည်သူအားလုံးအတွက် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ကို ရောက်ဖို့ ပေးဆပ်နိုင်သမျှ ပေးဆပ်နေတဲ့ အန်တီ့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်အပေါ် သစ္စာရှိမှုကို လေးစားဦးခိုက်ရင်း အန်တီ့စကားတိုင်းကို လိုက်နာနိုင်တဲ့ လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပါ့မယ်လို့ အဓိဌာန်ပြုပါတယ်။
(ဒီနှစ် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများနေ့ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားမှာ ကျမတို့ရဲ့ စိတ်ကူးတွေရှိသမျှ အကုန်ချပြနိုင်ဖို့ ပူးပေါင်းကူညီလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားရှိဖို့ ဒီပို့စ်ကို ရေးပါတယ်။)
ကျမလဲ ကျမတို့ရဲ့သူရဲကောင်း အန်တီစုအတွက် ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်...
I really appreciate your AWMC(Burma)'s idea creation and the great respect upon DASSK by showing this.
Carry on Burmese women the powerful!!!
ကိုယ်ဘာမှ မလုပ်နိုင် မတတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ ဆုတောင်းတာဟာ အကျိုးမဲ့မဖြစ်ပါဘူး အစ်မ။ ကျွန်မက ကျွန်မဘာမှ မလုပ်နိုင်တဲ့အရာအတွက် အမြဲဆုတောင်းပါတယ်။